Okwu mmeghe | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Jiangsu Shuangyang Ahụike Ngwaọrụ Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2001, na-ekpuchi mpaghara nke 18000 m2 , gụnyere ala nke karịrị 15000 m2. Isi ndebanye aha ya ruru nde Yuan 20. Dika ulo oru mba nke raara nye R & D, n'icheputa ahia, ire ahia na aka nke ihe eji eme ka ndi ozo, anyi enweta otutu ikike nke mba.
Titanium na titanium alloys bu akụrụngwa anyị. Anyị na-arụ nlezianya njikwa, ma họrọ ụlọ na mba ndị a ma ama, dịka Baoti na ZAPP, dịka ndị na-eweta ngwaahịa anyị. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere akụrụngwa na imepụta klaasị ụwa yana ngwaọrụ gụnyere igwe na-arụ ọrụ, slitting lathe, CNC milling machine, and ultrasonic Cleaner, wdg, yana ihe eji atụ nha ziri ezi gụnyere onye nyocha ụwa niile, elele elektrọnik elekere eletrik na igwe ntanetị, wdg. na usoro nhazi ọkaibe, anyị enwetara ISO9001: 2015 Asambodo nke Usoro Nchịkwa Ogo, ISO13485: Akwụkwọ Asambodo Nlekọta Nlekọta Ọgwụ maka Ngwaọrụ Ahụike, yana asambodo CE nke TUV Anyị bụkwa ndị mbụ gafere nyocha dịka Iwu Mmanye Iwu (Pilot) maka Ngwaọrụ Ahụ Ike nke Ezi Ọrụ Nlụpụta Maka Ngwaọrụ Ahụike nke National Bureau na-ahazi na 2007.
N'ihi nduzi na nkwado siri ike sitere n'aka ndị ọkachamara, ndị prọfesọ na ndị dibịa ama ama ama, anyị ebupụtala ọtụtụ ngwaahịa na-eduga nke ahaziri maka akụkụ anụ ahụ dị iche iche, gụnyere kpochidoro usoro mmezi efere, titanium plate fixation system, titanium cannulated ọkpụkpụ screw & gasket, titanium sternocostal usoro, kpochidoro maxillofacial esịtidem fixation usoro, maxillofacial esịtidem fixation usoro, titanium nkịtị usoro, anatomic titanium ntupu usoro, posterior thoracolumbar ịghasa-mkpanaka usoro, laminoplasty fixation system and basic tool series, wdg Anyị nwekwara ọkachamara na-akwado ịwa ahụ ngwá tent izute dị iche iche mkpa ahụike. Enweela otuto dị ukwuu site n'aka ndị dọkịta na ndị ọrịa maka ngwaahịa anyị dị mfe iji jiri usoro a tụkwasịrị obi na igwe ọrụ dị mma, nke nwere ike iweta oge ọgwụgwọ dị mkpụmkpụ.
Nrọ China na Shuangyang nrọ! Anyị ga-arapara n'ebumnuche anyị mbụ ka anyị bụrụ ndị ọrụ ebumnuche, ndị ọrụ dị mkpa, na-achọsi ike na ndị mmadụ, ma na-agbaso echiche anyị banyere "nghazi ndị mmadụ, iguzosi ike n'ezi ihe, ihe ọhụrụ, na ịdị mma". Anyị kpebisiri ike ịbụ mba na-eduga na ụlọ ọrụ ahụike Instrument. Na Shuangyang, anyị mgbe niile nabata ndị na-achọsi ike ka ha nwee ike ịmekọrịta ọdịnihu dị mma.
A pụrụ ịdabere na ya ma sie ike, anyị na-eguzo ugbu a na ebe dị elu n'akụkọ ihe mere eme. Na omenala Shuangyang abụrụla ntọala anyị na ike iji mee ihe ọhụụ, chọọ izu okè, ma wuo ụdị mba.
Relatedlọ ọrụ metụtara
N'oge Enlightenment site na 1921 ruo 1949, orthopedics nke Western magani ka bidoro na China, naanị na obodo ole na ole. N'oge a, ọpụrụiche orthopedic mbụ, ụlọ ọgwụ orthopedic na ọha mmadụ malitere ịpụta. Site na 1949 ruo 1966, ịkpụkpụ jiri nwayọọ nwayọọ bụrụ ọpụrụiche nke ụlọ akwụkwọ ahụike dị mkpa. Ejiri nke nta nke nta guzobe ọpụrụiche Ọkpụkpụ. E guzobere ụlọ ọrụ nyocha Orthopedic na Beijing na Shanghai. Ndị otu na gọọmentị kwadosiri ike ọzụzụ nke ndị dọkịta orthopedics. 1966-1980 bụ oge siri ike, afọ iri nke ọgba aghara, ọrụ nyocha na nyocha metụtara ya siri ike ịme, na nyocha nyocha bụ isi, nnọchi njikọta na akụkụ ndị ọzọ nke ọganihu. A malitere i beomi nkwonkwo akwara na mmepe nke ịwa ahụ ịkpụ azụ na-epulite. Site na 1980 ruo 2000, site na mmepe ngwa ngwa nke nyocha na ịwa ahụ na ịwa ahụ ịwa ahụ, ịwa ahụ nkwonkwo na trauma orthopedics, e guzobere ngalaba orthopedic nke Chinese Medical Association, e hiwere akwụkwọ akụkọ nke Chinese Journal of orthopedics, na ngalaba ọkachamara na ngalaba agụmakwụkwọ. guzobere. Kemgbe 2000, akọwapụtara ma dezie ụkpụrụ ndị ahụ, teknụzụ ka na-aga n’ihu mgbe niile, ọgwụgwọ ọrịa na-agbasawanye ngwa ngwa, na usoro ọgwụgwọ ka mma. The mmepe akụkọ ihe mere eme nwere ike summari dị ka: ulo oru ọnụ ọgụgụ mgbasa, iche, iche iche na internationalization.
Ihe ndi mmadu na-acho acho na ihe ndi ozo bu ihe di uku n'uwa, na-acho 37.5% na 36.1% nke ahia ndu uwa zuru oke; nke abuo, nlekọta ọnya na ịwa ahụ plastik bụ ngwaahịa ndị bụ isi, na-atụle 9.6% na 8.4% nke ahịa biomaterial ụwa. Ọkpụkpụ akụrụngwa nke akụrụngwa gụnyere: spain, trauma, nkwonkwo aka, ngwaahịa ọgwụ ọgwụ, neurosurgery (titanium mesh maka ndozi okpokoro isi) Ọnụ ọgụgụ dị elu n'etiti 2016 na 2020 bụ 4.1%, na mkpokọta, ahịa orthopedic ga-eto na ogo uto nke 3.2% kwa afọ. Ulo oru ogwu ogwu nke China bu uzo ato nke ahia: nkwonkwo, trauma na spain.
Omume mmepe nke orthopedic biomaterials na ngwaọrụ implantable:
1. Ihe anụ ahụ na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe dị iche iche (ihe mkpuchi HA, ihe nano biomaterials);
2. Nrụpụta anụ ahụ (akụrụngwa dị mma, ihe dị iche iche na-eme ka ọkpụkpụ dị iche, ihe na-emepụta ọkpụkpụ);
3. Orthopedic regenerative medicine (ọkpụkpụ anụ ahụ imu, cartilage anụ ahụ imu);
4. Ngwa nke nano biomaterials na orthopedics (ọgwụgwọ ọkpụkpụ etuto);
5. Ahaziri ahaziri (3D ebi akwụkwọ technology, nkenke machining technology);
6. Biomechanics of orthopedics (n'ichepụta bionic, ịme anwansị kọmputa);
7. Teknụzụ na-emerụ ahụ pere mpe, teknụzụ obibi 3D.